नायिकाहरु गायिकाको पक्षमा बोल्न थाले : रेखा र ऋचाले लेखे यस्तो स्ट्याटस - ABNews Nepal
Mar 1, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, headline nepal, katathmandu news, latest khabar, latest nepali song, taja khabar nepal
नाबालिग गायिकाको उजु`री परेपछि अभिनेता पल शाह न्यायिक हिरा`सतमा छन् । उनी तनहुँ प्रहरीको न्यायिक हिरास`तमा छन् । तर, पी:डित नाबालिग नायिकाको पक्षमा अभि`नेत्रीहरू बोल्न थालेका छन् ।
आरो`पी शाहको पक्षमा समूहगत आवाज उठिरहँदा अभि`नेत्रीहरू पी`डितको पक्षमा उभिएका हुन् । मंगलबार सार्वजनिक रुपमा अभिनेत्री रेखा थापाले बालिका कानुनतः सबै प्रकारको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्र्ने बताएकी छन् ।
‘२० वर्षमुनिका छोरीहरु बालिका हुन् । बालिका कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने हो,’ आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा अभिनेत्री रेखा लेख्छिन्, ‘को सँग लभ छ ? कति पटक यौ`न सम्पर्क भयो ?
यस्ता नैतिकता`वादी कुराको कानुनलाई म|तलव हुनुहुँदैन । समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन । केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँ भरी कतै नभएका नैतिक माप`दण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जा`जनक रुपमा नेपालमा व्याप्त छ ।’
रेखाले नाबालिगको संरक्षण गर्नु`पर्ने बताएको केही घण्टापछि अर्की अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि नाबालिगको संरक्षण कानु`नको सम्मान रहेको बताएकी छन् ।
मलाई विश्वास छ नाबालिगको विश्वासको ह त्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको च`रित्र ह त्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले । नाबालिगको संरक्षण, कानुनको सम्मान हो,’ ऋचाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेकी छन् ।
मुलुकी अपरा`ध संहिताले भन्छ– १८ वर्षमुनिकासँग यौ न सम्बन्ध राख्नु ब`लात्का`र हो । का`नुनमा कसले, के, कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेको कारण नाबालिगको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो। राज्य भनेको हामी पनि त हौनी। हैन र ?
१८ वर्ष मुनिकाको सहमतिमै यौ न सम्बन्ध भए पनि ब लात्का र ठहरि नुको का`नुनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ नै । अनि नाबालिगको संरक्षणको जिम्मेवारी समाजको पनि भएकाले नै यस्ता का`नुनी प्रवन्ध गरिएको हो।
यति बुझौँ नाबालि`गकै कर`मा पनि कसैले यौ`न सम्बन्ध राख्यो भने त्यो ब लात्का`र हो। उसैले बोलाएको भनेर का`नुनले छुट दिन्न । मलाई विश्वास छ, नाबालिगको विश्वासको ह`त्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र ह`त्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले। ना`बालिगको संरक्षण, कानुन`को सम्मान हो।